Brazing Steel Kuchengeta Pipe Nechirongwa-DAWEI Manufacturer
Brazing Steel Kuti Inye Pipe Nekudzivirira
Chinangwa: Kusungira sleeve ye-O-ring Face (ORFS) kana kuti sechibatanidza chemurume kune bhutu resimbi.
• Simbi yesimbi, 1 inch (2.54 cm) OD
• O-ring Mhemberero yeSeal and male connector fittings
• Shandura mabheji mabheji
• White WhiteFlow flux
• Siri kutsigira mandrel
Kupisa 1300 ºF (704 ºC)
• DW-UHF-20KW inotengesa kupisa system, yakagadzirirwa nebasa rinoshanda riri kure rakasara (2) 1.5 μF capacitors (nokuda kwe0.75 μF).
• Chirongwa chekuisa moto chinogadziriswa chakagadzirirwa uye chakagadzirirwa zvakananga kuti chigadziro ichi chiite
Nzira yechina-inotenderera 2.75 inch (7.0 cm) ID helical coil inoshandiswa kupisa zvose pombi yesimbi uye sleeve ORFS kana kuti ORFS mumiriri wevarume. Iyi kilori yakagadzirirwa kusungira sleeve kana kuti mumiririri wevarume kusvika muhutu. Zvikamu zvinenge zvakashongedzwa zvakasangana pamwe nekutsvaira uye kutsamwa kwemashure 45. Kushingaira kunoshandiswa kune tube kuitira kuti zvive nechokwadi kuti inowanikwa zvakazara mune zvinyorwa sezvinonzi bhandi rinoputika.
Mhinduro / Kubatsira Mazano:
• Kubwinya kwepakati mukati mamakumbo eiripi kunobvumira kutsvaira nyore nekudzikunura kwezvikamu
• Nesimba rinobatanidza kubatana kwekodhi kusvika kune zvakasvibirira zvinodziviswa.
Categories Technologies Tags Brazing Steel Kuti Inye Pipe Nekudzivirira, high frequency steel to iron, kusungirirwa kusungirirwa, kutengesa kusungirirwa kwesimbi kusimbi, RF kusungira pfuma kusimbi Post navigation
Brazing Carbide-Steel Tool ne Induction